UKUI: Iyo isina kuremerwa Linux Desktop Nharaunda yakagadzirwa neGTK uye Qt | Kubva kuLinux
UKUI: Iyo isina kuremerwa Linux Desktop Nharaunda yakagadzirwa neGTK uye Qt
KUI inotsanangurwa nevanogadzira sechiedza uye nekukurumidza Desktop Nzvimbo yakavakwa pane "Chinobatika" nokuti Linux uye kumwe kugovera kwerudzi Unix.
Uyezve, inopihwa se Desktop Nzvimbo inokwanisa kupa yakapusa uye inonakidza chiitiko che bhurawuza, tsvaga uye gadzirisa komputa uchishandisa GTK uye Qt tekinoroji.
Tisati tanyura mune ino inotevera Inodaidzwa Desktop Nharaunda UKUI (Ubuntu Kylin Mushandisi Wekushandisa) Zvakanaka kuyeuka kuti, pane dzimwe nguva isu takataura pane dzimwe nzvimbo dzeDesktop, dzinoshandiswa uye dzinonakidza, senge:
1 UKUI (Ubuntu Kylin Mushandisi Wekushandisa)
1.1 Chii chinonzi UKUI?
1.2 Kwakadii UKUI?
1.3 Maitiro ekuisa uye / kana kugadzirisa UKUI?
UKUI (Ubuntu Kylin Mushandisi Wekushandisa)
Mune ino post isu tichaisa pfungwa kunyanya pa Chii uye sei UKUI? kufambisa ruzivo rwayo kune vese vane shungu Linuxers.
Chii chinonzi UKUI?
UKUI (Ubuntu Kylin Mushandisi Wekushandisa) iri Desktop Nharaunda yakatanga kugadzirirwa kushanda pairi ubuntu kylin, inova Linux Distro inogadzira imwe yeakawanda evhenekeri yepamutemo iyo Ubuntu inayo. Uyezve, KUI iri forogo yeiyo Matte Desktop Nzvimbo.
Izvi zvinoita kuti ive Lightweight uye inokurumidza desktop desktop, iyo inoshandisa zviwanikwa zvishoma. Yako kodhi yakagadzirwa nehunyanzvi GTK uye Qt, iyo inopa kuita kwakanakisa uye mashandiro akanaka zvichikonzera mune yakanaka mushandisi ruzivo panguva yekushandisa kwemazuva ese. Uye zvakare, kutaridzika kwayo kunoonekwa kwakafanana Windows 7 Inoshanda System, inofambisa kushandiswa kwayo uye kuitiswa pane vashandisi vatsva kunze GNU / Linux.
Iyi Desktop Nzvimbo ine 2 yepamutemo mareferensi nzvimbo kwatingawane ruzivo rwese uye zvinyorwa zviri pamutemo nezvazvo. Uye izvi ndizvo:
Pawebhusaiti ino tinogona kuwana ruzivo rwepamutemo rwakanangana nehunhu, kusimudzira (kodhi, zvinyorwa, kumisikidza uye zvinhu), nharaunda neboka rekuvandudza. KUI. Uye zvakare, inopa mukana wekuwana nhau (nhau) nezvazvo. Parizvino UKUI inoenda kune vhezheni 3.0.
Pawebhusaiti ino tinogona kuwana ruzivo rwepamutemo rwakanangana ne Ubuntu Kylin, iyo, sezvatakambotaura, inouya nekumira, iine Desktop Nharaunda. Uye zvakare, pano tinogona kuikanda, kuverenga nhau (nhau), kujoina Ruzhinji kana kuwana Wiki yayo. Parizvino Ubuntu Kylin anoenda kune vhezheni 20.04.
KUI Inotsanangurwa se:
Nzwisisa uye nyore kushandisa: Iyo ine yakapusa uye inonzwisisika interface inoenderana nemaitiro evashandisi uye maviri-ekoramu dhizaini inoita kuti zvemukati zvemukati zvioneke zvakajeka.
Inesimba uye yakapfupika: Iyo ine yakanakisa faira maneja iyo inofambisa mashandiro ese akakodzera ekugadzirisa mafaera, kunyanya sezvo ichiisa mashandisiro anoshandiswa mashandiro munzvimbo inowanikwa nyore nyore.
Yakanaka uye yakagadzikana: Inogonesa chiito-chekubata zviito uchishandisa Kurumidza Kuvhura Bar uye Kurumidza Desktop Screen, iyo inogonesa mashandiro mashandiro evashandisi.
Inoshanda uye nyore kushandisaInopa menyu yemabasa muchimiro chechikamu, uko kunowanzo shandiswa mabasa kunoiswa muchikamu chimwe nechimwe zvinoenderana netsika yemushandisi.
Maitiro ekuisa uye / kana kugadzirisa UKUI?
Kana uchishandisa Ubuntu Kylin, kana imwe inoenderana Ubuntu kana Linux Distro, KUI Inogona kuiswa uye kuvandudzwa nenzira inotevera, uchishandisa inotevera PPA:
Uye kugadzirisa iyo iripo kune yazvino vhezheni inowanikwa ye KUI, unotevera kuraira wekuraira mushure mekuwedzera iyo zvinyorwa:
Mune yangu nyaya yangu, ndinoshandisa yangu Pindura zvemunhu MX Linux akadanwa Zvishamiso, anotsiva Vashandi vemumigodhi, inovawo yakavakirwa pa Debian GNU / Linux, Ndinogona kuiisa zviri nyore nemirairo inotevera yekuraira:
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" about «UKUI (Ubuntu Kylin User Interface)», inoverengeka «Entorno de Escritorio» imwe nzira uye inonakidza, izvo izvozvi, zvinoramba zvichizivikanwa pa «Ubuntu Kylin» uye nekuda kwekufanana kwaro ne windows interface, ive yekunakidzwa uye yekushandisa, yeiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » UKUI: Iyo isina kuremerwa Linux Desktop Nharaunda yakagadzirwa neGTK uye Qt
Mozilla yakatotanga neiyo activation ye Enhance Kuchengeta Kuchengetedza 2.0 muFirefox